Beinei Air Air Air အအေးဒီဇယ်မီးစက်ကဘာလဲ။ - MECCA ပါဝါ
နေအိမ် / သတင်း / သတင်း / Beinei Air Air Air အအေးဒီဇယ်မီးစက်ကဘာလဲ။
Beinei Air Air Air အအေးဒီဇယ်မီးစက်ကဘာလဲ။
views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-08-06 မူလ:ဆိုက်ကို
လေအေးဒီဇယ်စက်လောင်ကျွမ်းသောအင်ဂျင်သည်လောင်ကျွမ်းသောအပူစွမ်းအင်ကိုလောင်စာဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းဖြင့်လောင်ကျွမ်းစေသောအပူစွမ်းအင်ကိုလောင်ကျွမ်းစေသည့်အပူစွမ်းအင်ကိုသုံးရန်ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသောအတွင်းပိုင်းလောင်ကျွမ်းခြင်းအင်ဂျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဘူမိဗေဒရှာဖွေရေး, ရေနံတူးဖော်ရေးနှင့်စစ်တပ်ကဲ့သို့သောအထူးစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ အများစုမှာမြင်းကောင်ရေသည်အင်ဂျင်များဖြစ်သည်။
Beinei Air Cooled Diesel Generator Set သည်သုံးစွဲသူများအားအင်အားကြီးမားသောဒီဇယ်စွမ်းအားဖြင့်ကမ္ဘာ့အဖွဲလုပ်သောလေအေးပေးစက်တင်ပါးသည့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ခဲယဉ်းခြင်း, အအေး, ကုန်းပြင်မြင့်, မြင့်မားသောအပူချိန်စသည့်အလွန်အမင်းအေးခဲသောပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်သင့်တော်သည်။
ခိုင်မာသောနည်းပညာဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစွမ်းရည်များနှင့်တင်းကြပ်သောထုတ်ကုန်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်များကိုမှီခိုခြင်း, Beinei သည်ဂျာမန် Deutz 912/913 စီးရီးလေအေးပေးစက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များအပေါ် အခြေခံ. B / F2912, BF6L9l9133C နှင့်အခြားမော်ဒယ်များကိုထုတ်လုပ်သည် ။ဒီဇယ်စက်အစုံများသည်နှစ်, သုံး, လေးခုနှင့်ဆလင်ဒါခြောက်ခုကိုအပြည့်အဝထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ Beinei Air Air Air Air Air Air Ries Generator ၏စွမ်းအားကိုလွှမ်းခြုံမှုသည်အဆင့်တိုင်းရှိသုံးစွဲသူများလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန် 11KW သို့ 11 ကီလိုဂရမ်အထိရှိသည်။
1 ။ ရေအေးသည်အအေးခံအလတ်စားရေကိုလေရေတိုင်ကီမှတဆင့်လေထုထဲသို့သွယ်ဝိုက်ပြောင်းရွှေ့ရန်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်ပြောင်းရွှေ့ရန်အသုံးပြုသည်။ လေအေးသည်အအေးမိရန်အတွက်လေကြောင်းကိုတိုက်ရိုက်အသုံးပြုသည်။
2. Beinei Air Cooled Diesel Generator Set သည်ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, အရွယ်အစားနှင့်ပေါ့ပါးသောရိုးရှင်းပါသည်။ ရေအေးအေးသောဒီဇယ်အင်ဂျင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လေအေးဆန်သောယူနစ်များသည်အစိတ်အပိုင်းများကိုလျှော့ချရန်, ဖွဲ့စည်းပုံကိုရိုးရှင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်း, အရင်တုန်းက, လေအေးတဲ့စက်တွေရဲ့ဆလင်ဒါစင်တာအကွာအဝေးဟာယေဘုယျအားဖြင့်တူညီတဲ့ဆလင်ဒါအချင်းနဲ့နေရာရွှေ့ပြောင်းထားတဲ့ရေအေးစက်စက်စက်တွေထက်ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုကြီးတယ်, ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အရှည်ဟာရေအေးတဲ့စက်တွေထက်အနည်းငယ်ပိုရှည်တယ်, စက်များသည်ရေတိုင်ကီများနှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ရှေ့နှင့်နောက်ဘက်စွန်းများတွင်ရေကန်များနှင့်တွဲဖက်ထားသောရေတိုင်တန်းများလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ရေအေးစက်စက်စက်သည်လေအေးစက်ထက်ပိုရှည်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း Thebeinei Air Air Diesel Generator Set ကိုအအေးခံသော Diesel Generator Set Dieseel Generator Set သည်သေးငယ်ပြီးသေးငယ်လာပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လေအေးပေးစက်ယူနစ်နှင့်ရေအေးခဲသောယူနစ်သည်ဆလင်ဒါစင်တာအကွာအဝေး၏အညွှန်းကိန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပိုမိုနီးကပ်စွာနီးကပ်လာပြီ။
3 ။ Beinei Air Air Cooled Diesel Generator Set သည်စတင်လုပ်ကိုင်ရန်, Thebeinei Air ကိုအအေးခံသည့်အခါတွင်အာရုံစိုက်ပါ။ ကျေးဇူးပြု. အာရုံစိုက်ပါ။ အစပိုင်းတွင်အနိမ့်ဆုံးနှုန်းဖြင့်ခဏတာပျင်းရိနေသင့်သည်, အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုထိခိုက်စေ; ၎င်းကိုစစ်ဆင်ရေးကိုရပ်တန့်ပြီးနောက်ချက်ချင်းပိတ်ထား။ မရပါ။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်သည်အလတ်စားနှင့်အနိမ့်အမြန်နှုန်းဖြင့်ခဏတာပျင်းရိနေသင့်ပြီး standby အပူချိန်ကိုပိတ်ထားခြင်းမပြုမီလျှော့ချသင့်သည်။ ခွဲစိတ်ကုသမှုအတွင်းတွင်အင်ဂျင်အပူချိန်သည်အလွန်မြင့်မားသင့်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ Beinei Air Air Cooled Diesel Generator သည်ပန်ကာမှထုတ်လုပ်သောအားကြီးသောလေစီးဆင်းမှုကိုလုံးဝအားကိုးအားထားပြုစုထားသည့်အင်အားကြီးမားသောလေစီးဆင်းမှုနှင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုအတွင်းအပူချိန် 120 ဒီဂရီ (ရေအေးဂျင့်အင်ဂျင်များထက်အပူချိန်) တွင်လုံးလုံးလျားလျားမှီခိုနေရသည်။
ကောင်းကျိုးများ - Beinei Air Air Air Riesel Generator Set ၏အကြီးမားဆုံးအားသာချက်မှာရိုးရှင်းသောတည်ဆောက်ခြင်း, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းများ, စားသုံးမှု။ ပွက်နှိမ်ခြင်းသို့မဟုတ်အပူလွန်ကဲခြင်းများကိုအေးခဲစေသည့်အန္တရာယ်မရှိချေ။
Beinei Air Air Cooled Diesel Generator Set သည်ရေခဲမုန့်သို့မဟုတ်အအေးမိနေသောနေရာများအတွက်သင့်တော်သည်။ ရေဖြန်းခြင်း, ရေခဲခြင်းနှင့်အခြားပြ issues နာများကိုစဉ်းစားရန်မလိုအပ်ပါ။ အပူနှင့်စက်ယန္တရားဝန်အကန့်အသတ်ကြောင့်ပါဝါသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အသေးစားဖြစ်သည်။ လေအေးပေးစက်ယူနစ် \_"bei nei \_" ပိုကောင်းလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
MECCA Power သည်အရေးပေါ်အခြေအနေသို့မဟုတ်အထွေထွေလျှပ်စစ်ထောက်ပံ့ရေးဖြေရှင်းနည်းများနှင့်စနစ်ပေါင်းစည်းမှုဆောက်လုပ်ရေးဆောက်လုပ်ရေးအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်အဆင့်မြင့်အရေးပေါ်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ရေးစနစ်ဖြေရှင်းသူဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်များတွင် Beinei Air-Coolerel Generator Sets တို့ပါ0င်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
Beinei Air အအေးဒီဇယ်ထုတ်လုပ်သူအစုံ ဘိလပ်မြေစက်ရုံအတွက်ဒီဇယ်မီးစက် 1500rpm ဒီဇယ်ဆီထုတ်လုပ်သူ 300kva ဒီဇယ်ဆီထုတ်လုပ်သူ Mobile Diesel Generator ရေနံတွင်းလယ်ပြင်အတွက်ဒီဇယ်မီးစက် 150kva ဒီဇယ် Generator ရေစိုခံ Diesel Generator